Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo soo gababaysay Sixiddii imtixaanka Dugsiyadda sare ee Puntland. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo soo gababaysay Sixiddii imtixaanka Dugsiyadda sare ee Puntland.
By editor	/ July 5, 2018
7aad/05/ 2018 Waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabayey sixida imtixaanka 30 bishii jun bilowday waxaana ka qayb galay 162 Macalin oo kala ah 121 Saxaayaal, 13Hubiyaal, 28 horjogayaal iyo Masuuliyiinta Xafiiska imtixaanka.
Agaasimaha Imtixaanka Puntland Axmed Maxamud Warsame (Axmed Saahid) ayaa ka warmay Maraxaladaha uu maro sixitaanka imtixaanka.
Waxaa uu yiri Agaasimaha “ Imtixaanka puntland waxa uu maraa heerar xasaasi ah oo dabayaal laga soo bilaabo aruurinta xogta ardayda, dajinta imtixaanka dib u habynta, Dabacaada, qaadista, coddingka, Saxida, standardizationka, iyo Marka ugu danabysa oo siidaynta Natiijda imtixaaka.
Sanadka ayaa waxaa ku yimi dibi dhac balse samayn ku yeelan mayso ardayada xiligoodii natiida waa helayaan.
Warqadu waxay martaa Saddex gacmood oo isticmaala Saddex Qalin oo kala duwan oo is hubinaya.
Gacanta kowaad oo ah tan macallinka saxaya waxaa u isticmaala qalin guduudan
Waxaa ku xiga oo ka danabeeya gacanta labaad oo ah hubiyaha oo isticmaamala qalin madow,
Waxaa ku xiga oo ugu damabeeya gacanta saddexaad oo isticmaala qalin buluug ah.
Dhamaan saddexdaas heer ee is- hubinta ah waxaa ka sii sarreeya kalkaaliyaala dul wareega saxayaasha is random ahna u hubinaaal xaashiyo kala duwan.
Intaa kadib ayaa natiijadii waxaa lagu soo wareejiyaa Xafiiska imtixaanadka oo hubin maalmo ah kadib iyo dabo-gal ku soo wareejiya guddiga sare ee imtixaanka kuwaas masuuliyadoodu tahay jaangoynta imtixaanka iyo waafijinta international examination standard.
Waxaa kalo agaasamaha imtixaanku hanbalayo shaqo adkaysi u diray macalimiintii imtixaanka saxaysay oo yiri waxay qabanyaan shaqo adag oo awood iyo karti ku jirto ilahayna ajarr iyo Xasnaad ha ka siiyo shaqada ay qabanayaan.
Natiijada imtixaanka Dugsiyadda Sare ee puntland ayaa ah maalmaha fooda inagu soo haya insha allah.
Guul iyo Gobonimo.
By:Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare.